ထရိုင်ဘွန်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲများအကြောင်း ဆွေးနွေးချက်များ > Marine Design And Construction Softwares > Tribon > ထရိုင်ဘွန်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
View Full Version : ထရိုင်ဘွန်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
ထရုင်ဘွန်ဆိုတာ Comercial ရော Educational ရော အဆင်ပြေတဲ့ သဘော်တည်ဆောက်ရေး
ဆော့ဝဲတစ်ခုပါ။သူက ပိုပြီး ပရိုကျပါတယ်.ကိုင်တွယ်၇တာ နည်းနည်းပိုခက်ခဲပါတယ်..၁၀ ရက်လိုင်စင်ဖိုင်ပဲရပါသေးတယ်.
ဆွေးနွေးပေးဖို့ NA တွေ တော်တော်များများကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်. နောက်ပို့စ်များမှာ
sc2005 ကို တင်နည်း ၁၀ ၇က်ပဲရတဲ့ လိုင်စင်ကို အကြာကြိးရအောင် လုပ်နည်း နှင့်တကွ
project managment ကို ပြောပေးသွားပါ့မယ်..ကျွှမ်းကျင်သူများကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်.
hi ako .. i hope ,u know about Tribon very well..
pls teach me how to use it ,
sometime , i meetalot of problem ..
i want to use it , very well . (piping , structure outfitting)
but i cannnot use it , i can use it ,a bit .
if i can know ur contact no: or e-mail address pls send it to me.
my name is hein soe ..
ကျနော်လည်း သိပ်တော့ မသိသေးပါဘူး ။လေ့လာဆဲပါပဲဗျာ။
ကိုဟိန်းစိူး သုံးနေတာက ဘာ version လဲ။
M3 လိုင်စင်အပြည့်လား။ ကျနော်လည်း လေ့လာဆဲဆိုတော့ ပြောပြရမှာခက်တယ်ဗျ
ကိုဟိန်းစိုး လုပ်နေတဲ့ အဆင့်လေးတွေကိုလည်း ပြောပြပေးပါဦး
ကျနော်က သိပ်မအားတော့ အားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာ
ထရိုင်ဘွန်အကြောင်းလေးတွေကိုတော့ တင်ပေးသွားဖို့ ရည်၇ွယ်ထားပါတယ်။
လောလောဆယ်တော့ shipcon ကိုလုပ်နေပါတယ်။
ကျနော်သုံးနေတာ.. M3 လိုင်စဉ်အပြည့် လို့ပြောရမှာပေါ့ .... လောလောဆယ်ကျနော်လဲ.. သဘောင်္ကျင်းကိုရောက်တာ မကြာသေးတော့ လေ့လာဆဲပါ... ဒီ TRIBON သုံးတာတော့.. ၆ လ လောက်တော့ရှိပါပြီ... ဘာမှတော့ သိပ်မသိသေးဘူးဗျ... ကျနော်က mechanical လေ..
ဒိေ၇ာက်စက... သဘောင်္အခေါ်ဝေါ်တွေ မသိလို့.. တော် တော် လေး အခက်တွေ့တာ ပေါ့ဗျာ... ဒီ ဖို၇မ် လေးကို တွေ့မှ.. တော်တော်လေး...
အကြိုးပြုတာ.... tribon မှာ.. piping အထူးသဖြင့် အသုံးများတယ်... piping modelling mar .. အခက်အခဲလေးတွေရှိနေလို့... drafting ကတော့.. သိပ်အခက်အခဲမရှိအသုံးပြုလို့ရပါတယ်...ဒီမှာ သင်တန်းတော့တက်လိုက်သေးတယ်... ဒါပေမယ့်ဗျာ.. TRIBON sofeware ကအကျယ်ကြီးဆိုတော့..
သုံးလထဲနဲ့... drafting , structure , piping , electrical, modelling , volume , စသဖြင့်ပေါ့... အချိန်ကလဲ.. တပတ်ကို.. ၂ ရက်ပဲပေးနိုင်တာဆိုတော့.. အခြေခံလောက်ပဲ ရလိုက်တာ... အထူးသဖြင့်.. tribon mananger ကိုတော့.. တော်တော်လေးကို.. မေ့သွားတာ...ဒါပေမယ့်.. ကျနော် လောလောဆယ်လိုတာက piping modelling အသုံးပြု ရာမှာ အခက်အခဲ နဲနဲ ၇ှိနေလို့ ဗျ... ဥပမာ... pipe line တစ်ခုကို.. name နဲ့ပေးထားပြီး ဆွဲ ထားတယ်ဆိုကြပါစို့.... နောက်မှ... module အလိုက် name ပြောင်းချင်တာကို... pipe line တစ်ခုလုံးလဲ... မပြောင်းချင်ဘူး.. spool no; တစ်ခုစာလောက်ပေါ့ ပြောင်းချင်တာ.... တစ်ခါတစ်လေ.. ရတယ်ဗျာ.. တစ်ခါတစ်လေ မရဖြစ်နေတာ... ကွန်မန်း မမှတ်တာ... သေချာမသိတာပေါ့... tribon မှာက သိတဲ့အတိုင်း.. undo မပါတော့.. တော်တော်ဒုတ်ခ ရောက်တယ်လေ.... မှား၇င်သေပီ... အကုန်ပြန်လုပ်ရတာ...
ဒါကြောင့်.. tribon ,,, piping modelling မှာအသုံးပြုပုံလေးတွေ... ကို.. ဆွေးပေးပါဦး.. ကျနော်ဆီမှာ ရှိနေတဲ့စာအုပ်တွေကလဲ...အခြေခံလောက်ပဲပြောထားတာ... ဆိုတော့.. သိပ်အဆင်မပြေဖြစ်နေတာပေါ့... လေ့လာစရာ စာအုပ်လေးတွေရှိရင်လဲ.. ရချင်ပါတယ်... tribon က အခြား ဟာတွေလို... ရှင်းပြ၇ခက်တယ်လို့တော့ ကျနော်ထင်တယ်ဗျာ... ဒါပေမယ့် လေ့လာ နေတယ်သူတွေဆိုတော့.. နားလည် နိုင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်... နောက်ဆိုရင်.. ကျနော်လဲ သိ သလောက်တော့... tribon အသုံးပြုပုံတွေကို.. ဝေမျှပါဦးမယ်...
:-*ကျေးဇူး.. တင်စွာဖြင့်... ဟိန်းဟိန်း.. :-*
အခုလောလောဆယ်ဆွဲထားတဲ့ spool (ပြောင်းချင်တဲ့) ကို batch နဲ့ program ထုတ်ပြိးတော့ အဲဒီ program ကို name ပြောင်းပြီးတော့ အဲဒီ program ကို ပြန် run ကြည့်ပါ။ နာမည်အသစ်နဲ့ ထွက်လာဖို့များပါတယ်။
planner hull မှာ program နဲ့ part တွေ လုပ်သလိုပဲ။
(မှတ်ချက်။ လုပ်ဖူးသော ကျနော်အစ်ကိုမှ ပြောပြတာကို တင်ပေးတာပါ။)
ကျနော်တို့လည်းးပြန်စမ်းပြီးပြန်တင်ပေးပါ့မယ် ရမရ ပြန်ပြောကြည့်ပေါ့နော်။
အရင်ကဟာက ကျနော်ရဲ့အစ်ကိုတစ်ယောက်ပြောတာကို ပြန်လည်တင်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အခု ပို့စ်ကတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ပြီးသင့်လျော်မယ့် နည်းကို ရေးထားတာပါ။
၁၀၀ ရာခိုင်နူန်း right method လို့တော့ မယူုပါဘူ။
တစ်ချက် try ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်
စစချင်း ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ပိုက်ကို Activate လုပ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ menu က Pipie-&gt; Pipe Group-&gt; Duplicate ကို ရွေးပါ။
ဒါဆိုရင် အောက်ကဲ့သို့ Comfimation dialog က အရင်ဟာကို ဆက်လက်ထားမထား မေးမှာပါ။
YES or No ပေါ့
ကိုယ်လိုချင်တဲံ spool ကိုရွေးရပါမယ်။
ပြီးရင် Model new name မှာ Module ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ နာမည်ပါ ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
အရင်ဟာ ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ delete လိုက်ပေါ့။
ကိုheinheinဆီမှာ Tribon training book တွေ ရှိရင် share နိုင်မလား
ကျနော်ဆီမှာက M1 book တွေပဲ၇ှိလို့
ကျနော် အဲဒီနည်းကို.. အ၇င်က စမ်းကြည့်ပီးပီ ဗျ .. pipe တစ်ခုလုံးပြောင်းသွားတာ.. ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဆက်သုံးချင်ရင်.. အဆင်မပြေဘူးဗျ..
ကျနော်.. အစ်ကိုပြောတဲ့နည်းကိုထပ်စမ်းကြည့်ပါဦးမယ်... အခု ကျနော်.. HVAC လုပ်နေလို့.. PIPING ဘက်ကို မလှည့်နိုင်သေးဘူး..
ကျနော်ဆီမှာ M3 BOOK တော့ရှိပါတယ်.. အခြေခံစာအုပ်တွေပါ.. နည်းနည်းတော့အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်.... ဒါပေမယ့််.. HARD COPY ပဲရှိတာဗျ..
ဘယ်လို SHARE လုပ်ရမလဲတော့မသိဘူး..
အင်းဗျာ။ hardcopy ဆိုတော့ ခက်သွားတာပေ့ါနော်
ကျနော်လည်း အင်တာနက်က သုံးတာနည်းတော့ ပြန်စာနောက်ကျရော
သင်္ဘော စဆောက်မယ်ဆိုရင် ဦးစွာ Initial Design ထဲက project tool ကို ဖွင့်ပါ။ Ship Hull ရဲ့ Principal Parameters တွေ Design Defaults ထဲမှာထည့်ပါ။